ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့သူကိုပဲချစ်မိနေရတဲ့အကြောင်းရင်း – Trend.com.mm
Posted on June 9, 2018 June 4, 2018 by San Wadi Hnin
ယောက်ျားလေးရယ်မိန်းကလေးရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့သူတွေကိုပဲချစ်မိနေတတ်တဲ့လူတန်းစားက သပ်သပ်ကိုရှိတာပါ။ ဘဝတိုတိုလေးမှာ အချစ်ဆိုတာ mutual feeling ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ တစ်ဖက်သတ်ချစ်နေရတဲ့သူက ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကုိုချစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ချစ်သူလုပ်နေသူက ကိုယ့်အပေါ်နည်းနည်းလေးမှမကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းမှန်းသိရက်နဲ့တော့ဆက်ချစ်မနေသင့်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် အချစ်ဆိုတာ ချစ်မယ်၊မချစ်ဘူး စိတ်ထင်ရာလုပ်လို့ရတာမျိုးမှမဟုတ်တာကိုး။ လူတစ်ယောက်ကိုစတွေ့တာနဲ့သူ့ကိုချစ်တယ်မချစ်ဘူးဆိုတာက နှလုံးသားကသတ်မှတ်ပြီးသား၊တဖြည်းဖြည်းမှဦးနှောက်ဆီသတင်းပို့လာတာမဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် အချစ်ကထူးဆန်းပါတယ်။ကိုယ့််အပေါ်တစ်စက်ကလေးမှမကောင်းတဲ့သူကိုပဲတမ်းတမ်းစွဲဖြစ်နေရတာဘာကြောင့်ပါလဲ။ ဒီပြဿနာကို စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာမှုအရ ကိုယ့််အပေါ်မကောင်းတဲ့သူကိုချစ်မိနေတဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်တဲ့အခါ ဒီအချက်တွေကိုလေ့လာတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့….
ဟုတ်ပါတယ်။ 2014 မှာကောက်ယူရရှိခဲ့တဲ့ Glamour လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအမျိုးသမီးတွေကိုကောက်ယူရရှိတဲ့စစ်တမ်းအရ 50% သောအမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကုိုယ်စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိကြပဲ 80% သော အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့မကျေနပ်ချက်တစ်ခုခု၊စိတ်ပျက်စရာတစ်ခုခုကိုမတွေးပဲ မှန်ထဲက ကိုယ့်ပုံရိပ်ကိုကိုယ်မကြည့်နိုင်တဲ့အထိပဲလို့သိရပါတယ်။ ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုိယ်လေးစားမြတ်နိုးမှုမရှိပဲ စိတ်ပျက်အားလျော့နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ အချစ်ရေးမှာလည်း သူတို့ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့၊ချစ်မြတ်နိုးခြင်းမရှိတဲ့ လူတွေကိုပဲ နှစ်သက်လေ့ရှိကြကြောင်း သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ သူတို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဒီ့ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တာနဲ့ထိုက်တန်ကြောင်းယုံကြည်ချက်မရှိကြလို့ပါတဲ့။
ဒါကတော့ အသက်ကြီးကြီးအမျိုးသမီးတွေမှာ၊ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းစုံတွဲတွေကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းမနေချင်တာနဲ့ရရာဖမ်းကြိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီလိုကြိုက်မိတဲ့သူကလည်း ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့သူဖြစ်နေတတ်တဲ့သဘောပါ။တစ်ယောက်တည်းနေတာဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့သူကိုကြိုက်မိထားပြီးခံစားနေရမှာသာ ပြဿနာပါ။ ကိုယ့်ဘေးမှာတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိနေလို့ဘဝကပြေလည်သွားမယ်လို့မတွေးပါနဲ့။ နှစ်ယောက်စာပြဿာနာတွေနဲ့စိတ်ညစ်နေရမှာက အများကြီးပိုပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အရာဖြစ်ကြောင်းသတိချပ်စေလိုပါတယ်။
ကိုယ့််အချစ်နဲ့အရာရာအကောင်းအတုိုင်းဖြစ်စေမယ်တို့ဘာတို့က သီချင်းထဲမှာတောင်နားထောင်လို့မကောင်းတော့ပါဘူး။(သီချင်းကြီးက ရိုးလာပြီလေ) မကောင်းတဲ့သူဟာ ပင်ကိုိယ်အခံကကိုမကောင်းတာဖြစ်ဖို့များပါတယ်။သင်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်တည်းနဲ့တော့ အကောင်းဘက်ကိုပြောင်းလဲလာဖို့က အင်မတန်ပါးလျတဲ့မျှော်လင့်ချက်ပါ။ သူကသင့်အပေါ်တင်မဟုတ်ဘူး၊ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှမကောင်းတာ ဆိုရင်တော့ သင့်အတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ပါဘူး။ စက်ဘီးတွေကားတွေသာ အပျက်ကြီးဝယ်ပြီးကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှပြင်စီးလို့ကောင်းတာ၊ ချစ်သူရည်းစားကတော့ ကိုယ်သာတမလွန်ကိုကူးပြောင်းသွားမယ် ပြင်လို့ရဖို့ကတော့ ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ရယ်ပါ။
ချစ်သူရည်းစားအကြောင်းစဉ်းစားမိတဲ့အခါ လူတိုင်းမှာ ကိုိယ့််စံနှုန်းတွေနဲ့ကိုယ်ရှိကြပါတယ်။ ရုပ်ချောမှ၊ချမ်းသာမှ၊ဘယ်လိုကားမျိုးစီးနိုင်မှ စတဲ့ အပေါ်ယံအရာတွေကိုချည်း ဂရုပြုမိပြီး ကြင်နာတတ်လား၊ရိုးသားလား၊တာဝန်ယူချင်စိတ်ရှိရဲ့လား စတဲ့ တကယ်ဘဝမှာအသုံးလိုမယ့််အရာတွေကို ဂရုမပြုမိတာကြောင့်လည်း သင့်အတွက်မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပဲဆုံစည်းနေရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာချက်အရ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့လိင်ကွဲတဲ့မိဘတွေရဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်ကို ကြီးလာတဲ့အခါ အခြားသူတွေမှာလိုက်ရှာလေ့ရှိကြပါတယ်တဲ့။မိန်းကလေးတွေက သူတို့အဖေနဲ့စိတ်သဘောထားခြင်းတူတဲ့သူတွေကိုကြွေတာများသလိုပေါ့။ အကယ်၍သင်သာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေခဲ့ရင် သင့်ရဲ့စံနမူနာကိုပြန်စဉ်းစားဖို့သင့်ပါပြီ။လောကကြီးမှာ သင့်မိဘလောက်တော့သင့်ကိုဘယ်သူမှသည်းခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ချစ်သူဟာ သင့်အဖေလောက်မဟုတ်တောင်သင့်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ သည်းခံနိုင်လိမ့်မှာပါ။ လောဘကြီိးနေမိသလားဆိုတာကိုယ့််ကိုယ်ကိုယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။
ခုပြောပြသွားတာတွေကတော့ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့သူတွေကိုချစ်မိနေရခြင်းရဲ့အဖြစ်နိုင်ဆုံးအကြောင်းအရင်းတွေပါ။ သတိထားသင့်တာကတော့..တစ်ခါတစ်ရံမှာ အဲ့ဒါဟာ..အချစ်မဟုတ်ပါဘူး။စွဲလန်းမှုသက်သက်ပါ။ စွဲလန်းမှုဆိုတာမျိုးကကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သင်က သူ့ကိုချစ်မိနေလို့မဖြတ်နိုင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ စွဲလန်းစ်ိတ်ကြောင့်သူ့ဆီကရုန်းမထွက်နိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိနားလည်ဖို့ထက်ဘဝမှာဘယ်အရာကမှအရေးမကြီးပါဘူး။
ယောကြွားလေးရယမြိနြးကလေးရယမြဟုတပြါဘူး။ ကိုယြ့အပေါမြကောငြးတဲ့သူတှကေိုပဲခစွမြိနတတေတြဲ့လူတနြးစားက သပသြပကြိုရှိတာပါ။ ဘဝတိုတိုလေးမှာ အခစွဆြိုတာ mutual feeling ဖှစသြငြ့ပါတယြ။ တစဖြကသြတခြစွနြရတေဲ့သူက ကိုယြ့အပေါမြကောငြးတာပဲဖှစဖြှစြ ကိုယြ့ကုိုခစွပြါတယဆြိုပှီး ခစွသြူလုပနြသေူက ကိုယြ့အပေါနြညြးနညြးလေးမှမကောငြးတာပဲဖှစဖြှစြ ကိုယြ့အပေါမြကောငြးမှနြးသိရကနြဲ့တော့ဆကခြစွမြနသငြေ့ပါဘူး။ဒါပမယြေ့ အခစွဆြိုတာ ခစွမြယြ၊မခစွဘြူး စိတထြငရြာလုပလြို့ရတာမွိုးမှမဟုတတြာကိုး။ လူတစယြောကကြိုစတှတေ့ာနဲ့သူ့ကိုခစွတြယမြခစွဘြူးဆိုတာက နှလုံးသားကသတမြှတပြှီးသား၊တဖှညြးဖှညြးမှဦးနှောကဆြီသတငြးပို့လာတာမဟုတလြား။ ဒါပမယြေ့ အခစွကြထူးဆနြးပါတယြ။ကိုယြ့အြပေါတြစစြကကြလေးမှမကောငြးတဲ့သူကိုပဲတမြးတမြးစှဲဖှစနြရတောဘာကှောငြ့ပါလဲ။ ဒီပှဿနာကို စိတပြညာရှငတြှရေဲ့လလေ့ာမှုအရ ကိုယြ့အြပေါမြကောငြးတဲ့သူကိုခစွမြိနတေဲ့ လူတှရေဲ့ စိတကြိုခှဲခှမြးစိတဖြှာကှညြ့တဲ့အခါ ဒီအခကွတြှကေိုလလေ့ာတှရှေိ့ရတယလြို့ဆိုပါတယြ။အဲ့ဒါတှကတေော့….
ဟုတပြါတယြ။ 2014 မှာကောကယြူရရှိခဲ့တဲ့ Glamour လို့ခေါတြဲ့ ကမျဘာတစဝြှမြးကအမွိုးသမီးတှကေိုကောကယြူရရှိတဲ့စစတြမြးအရ 50% သောအမွိုးသမီးတှဟော ကိုယြ့ကိုယကြုိုယစြိတကြွနပေမြှုမရှိကှပဲ 80% သော အမွိုးသမီးတှဟော သူတို့ကိုယသြူတို့မကွနပေခြကွတြစခြုခု၊စိတပြကွစြရာတစခြုခုကိုမတှေးပဲ မှနထြဲက ကိုယြ့ပုံရိပကြိုကိုယမြကှညြ့နိုငြတြဲ့အထိပဲလို့သိရပါတယြ။ ဒီလိုကိုယြ့ကိုယကြိုယလြေးစားမှတနြိုးမှုမရှိပဲ စိတပြကွအြားလွော့နတေဲ့အမွိုးသမီးတှဟော အခစွရြေးမှာလညြး သူတို့ကိုတနဖြိုးမထားတဲ့၊ခစွမြှတနြိုးခှငြးမရှိတဲ့ လူတှကေိုပဲ နှစသြကလြရှေိ့ကှကှောငြး သိရပါတယြ။ ဘာကှောငြ့ဆိုတော့ သူတို့ဟာ ကိုယြ့ကိုယကြိုယဒြီ့ထကပြိုမိုကောငြးမှနတြာနဲ့ထိုကတြနကြှောငြးယုံကှညခြကွမြရှိကှလို့ပါတဲ့။
ဒါကတော့ အသကကြှီးကှီးအမွိုးသမီးတှမှော၊ဒါမှမဟုတြ သူငယခြငြွးစုံတှဲတှကှေားမှာပိတမြိနတေဲ့သူတှမှောဖှစလြဖှေ့စထြရှိပါတယြ။ တစယြောကတြညြးမနခငွေတြာနဲ့ရရာဖမြးကှိုကလြိုကတြာဖှစပြှီး အဲ့ဒီလိုကှိုကမြိတဲ့သူကလညြး ကိုယြ့အပေါမြကောငြးတဲ့သူဖှစနြတတေတြဲ့သဘောပါ။တစယြောကတြညြးနတောဘာမှပှဿနာမရှိပါဘူး။ ကိုယြ့အတှကမြကောငြးတဲ့သူကိုကှိုကမြိထားပှီးခံစားနရမှောသာ ပှဿနာပါ။ ကိုယြ့ဘေးမှာတစစြုံတစယြောကရြှိနလေို့ဘဝကပှလညေသြှားမယလြို့မတှေးပါနဲ့။ နှစယြောကစြာပှဿာနာတှနေဲ့စိတညြစနြရမှောက အမွားကှီးပိုပှီးဖှစနြိုငခြွရှေိတဲ့အရာဖှစကြှောငြးသတိခပွစြလေိုပါတယြ။
ကိုယြ့အြခစွနြဲ့အရာရာအကောငြးအတုိုငြးဖှစစြမယေတြို့ဘာတို့က သီခငြွးထဲမှာတောငနြားထောငလြို့မကောငြးတော့ပါဘူး။(သီခငြွးကှီးက ရိုးလာပှီလေ) မကောငြးတဲ့သူဟာ ပငကြိုယအြခံကကိုမကောငြးတာဖှစဖြို့မွားပါတယြ။သငသြူ့ကိုခစွတြယဆြိုတဲ့အခကွတြစခြကွတြညြးနဲ့တော့ အကောငြးဘကကြိုပှောငြးလဲလာဖို့က အငမြတနပြါးလတွဲ့မွှောလြငြ့ခကွပြါ။ သူကသငြ့အပေါတြငမြဟုတဘြူး၊ဘယသြူ့အပေါမြှာမှမကောငြးတာ ဆိုရငတြော့ သငြ့အတှကမြွှောလြငြ့ခကွမြရှိတော့ပါဘူး။ စကဘြီးတှကေားတှသော အပကွကြှီးဝယပြှီးကိုယြ့လကထြဲရောကမြှပှငစြီးလို့ကောငြးတာ၊ ခစွသြူရညြးစားကတော့ ကိုယသြာတမလှနကြိုကူးပှောငြးသှားမယြ ပှငလြို့ရဖို့ကတော့ ကမြးမမှငလြမြးမမှငရြယပြါ။
ခစွသြူရညြးစားအကှောငြးစဉြးစားမိတဲ့အခါ လူတိုငြးမှာ ကိုယြ့စြံနှုနြးတှနေဲ့ကိုယရြှိကှပါတယြ။ ရုပခြွောမှ၊ခမြွးသာမှ၊ဘယလြိုကားမွိုးစီးနိုငမြှ စတဲ့ အပေါယြံအရာတှကေိုခညြွး ဂရုပှုမိပှီး ကှငနြာတတလြား၊ရိုးသားလား၊တာဝနယြူခငွစြိတရြှိရဲ့လား စတဲ့ တကယဘြဝမှာအသုံးလိုမယြ့အြရာတှကေို ဂရုမပှုမိတာကှောငြ့လညြး သငြ့အတှကမြကောငြးတဲ့သူတှနေဲ့ပဲဆုံစညြးနရတောဖှစနြိုငပြါတယြ။
စိတပြညာရှငတြှရေဲ့လလေ့ာခကွအြရ လူတှဟော သူတို့ရဲ့လိငကြှဲတဲ့မိဘတှရေဲ့ အသှငသြဏျဍာနကြို ကှီးလာတဲ့အခါ အခှားသူတှမှောလိုကရြှာလရှေိ့ကှပါတယတြဲ့။မိနြးကလေးတှကေ သူတို့အဖနေဲ့စိတသြဘောထားခှငြးတူတဲ့သူတှကေိုကှတောမွားသလိုပေါ့။ အကယြ၍သငသြာအဲ့ဒီလိုဖှစနြခေဲ့ရငြ သငြ့ရဲ့စံနမူနာကိုပှနစြဉြးစားဖို့သငြ့ပါပှီ။လောကကှီးမှာ သငြ့မိဘလောကတြော့သငြ့ကိုဘယသြူမှသညြးခံမှာမဟုတပြါဘူး။ သငပြိုငဆြိုငထြားတဲ့ခစွသြူဟာ သငြ့အဖလေောကမြဟုတတြောငသြငြ့ကိုအတိုငြးအတာတစခြုအထိတော့ သညြးခံနိုငလြိမြ့မှာပါ။ လောဘကှီိးနမေိသလားဆိုတာကိုယြ့ကြိုယကြိုယပြှနလြညဆြနြးစစသြငြ့ပါတယြ။
ခုပှောပှသှားတာတှကတေော့ ကိုယြ့အပေါမြကောငြးတဲ့သူတှကေိုခစွမြိနရခှေငြးရဲ့အဖှစနြိုငဆြုံးအကှောငြးအရငြးတှပေါ။ သတိထားသငြ့တာကတော့..တစခြါတစရြံမှာ အဲ့ဒါဟာ..အခစွမြဟုတပြါဘူး။စှဲလနြးမှုသကသြကပြါ။ စှဲလနြးမှုဆိုတာမွိုးကကှောကဖြို့ကောငြးပါတယြ။ သငကြ သူ့ကိုခစွမြိနလေို့မဖှတနြိုငတြာမဟုတပြဲနဲ့ စှဲလနြးစြိတကြှောငြ့သူ့ဆီကရုနြးမထှကနြိုငတြာလညြးဖှစနြိုငပြါတယြ။ ကိုယြ့ကိုယကြိုယသြိနားလညဖြို့ထကဘြဝမှာဘယအြရာကမှအရေးမကှီးပါဘူး။